Filipiana 1 - Ny Baiboly
Filipiana toko 1
Fiarahabana - Fitiavany lehibe ny Filipiana - Ny toetrany tao Roma - Faly izy mahita fa torina ny Evanjely - Ny fanampoizany tsy ho faty amin'izao - Ny amin'ny firaisam-po amam-panahy.
1Paoly sy Timote, mpanompon'i Jesoa-Kristy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa, mbamin'ny Pretra sy ny Diakra any Filipy: 2ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika, sy Jesoa-Kristy Tompo.
3Misaotra an'Andriamanitra isaky ny mahatsiaro anareo aho; 4ary mivavaka an-kafaliana isaky ny mivavaka ho anareo rehetra, 5noho ny firaisanareo hampandroso ny Evanjely, hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny; 6sady matoky aho fa izay nanomboka izany asa soa indrindra izany tao aminareo, dia hanatanteraka izany mihitsy hatramin'ny andron'i Jesoa-Kristy. 7Ary rariny ny iheverako anareo rehetra toy izany, satria efa mby ato am-poko hianareo rehetra, noho hianareo rehetra mpiombona ny fahasoavana ananako, na amin'ny fifatorako, na amin'ny fampandreseko lahatra sy fanamafisako orina ny Evanjely. 8Fa Andriamanitra no vavolombelona fa manina anareo rehetra ao am-pon'ny Kristy Jesoa indrindra aho.
9Ary izao no angatahiko aminy, dia ny hitombo bebe kokoa hatrany hatrany amin'ny fahaizana amam-pahalalana rehetra ny fitiavanareo, 10mba hamantaranareo izay tsaratsara kokoa, dia ho madio sy tsy manan-tsiny mandra-pihavin'ny andron'ny Kristy hianareo, 11ary feno ny vokatry ny fahamarinana avy amin'i Jesoa-Kristy, ho voninanitra sy fiderana an'Andriamanitra.
12Tiako ho fantatrareo, ry rahalahy, fa efa tonga fampandrosoana ny Evanjely ny zavatra nanjo ahy, 13satria efa vaky ato an-trano fiambenana sy any ivelany izao, fa noho ny Kristy no ifatorako; 14ka nahazo toky noho ny fifatorako ny ankabeazan'ny rahalahy ao amin'ny Tompo, ary vao mainka mihasahisahy kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy aman-tahotra. 15Marina fa noho ny fialonana sy fifandirana no itorian'ny sasany ny Kristy, nefa ao koa ny manao an-katsaram-po tokoa, 16ka ny an'ireto dia fitiavana no anaovany, satria fantany fa voatendry hampandresy lahatra ny Evanjely aho; 17fa ny an'irerý kosa dia tsy fo mahitsy no itoriany ny Kristy, fa an-kasomparana kendreny hanampy fahoriana ny fifatorako. 18Nefa mampaninona moa izany e? Rahefa ny Kristy no torina, na amim-pihatsarambelatsihy izany, na amin-kitsim-po, dia mahafaly ahy izany, ary mbola hahafaly ahy koa aza. 19Satria fantatro fa hody ho famonjena ahy izany, noho ny fivavahanareo sy noho ny fitahian'ny Fanahin'ny Kristy; 20tsy izany ihany, fa manantena sy matoky aho fa tsy hahazo henatra na amin'inona na amin'inona, fa mainka ho feno ny fahasahiako, ka na dia ankehitriny aza, toraka ny mandrakariva koa, dia homem-boninahitra amin'ny tenako ny Kristy, na velona aho, na maty.
21Satria raha ny amiko, dia ny Kristy no ahavelomako, ary ny fahafatesana no ahazoako tombony. 22Raha mbola velona amin'ny nofo anefa aho, dia ho fahavokaran'ny asako izany, ka tsy hitako izay hofidiko, 23fa sanganehana eo anelanelan'izy roa ireo aho: ny handeha ho any amin'ny Kristy moa, iriko sy tsara lavitra: 24nefa ny hitoetra amin'ny nofo kosa no ilaina kokoa noho ny aminareo. 25Ary izany indrindra no ampoiziko sy fantatro, dia ny hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra, mba hahazoanareo fandresena sy fifaliana amin'ny finoanareo. 26Ka dia hitombo ao amin'ny Kristy Jesoa ny reharehanareo noho ny amiko, amin'ny hankanesako atý aminareo indray.
27Fa izao ihany e: manaova fitondran-tena mendrika ny Evanjely hianareo; ary amin'izay, tonga moa aho, dia hahita anareo; tsy tonga kosa, dia handre ny aminareo, fa hoe: maharitra amin'ny fanahy iray hianareo, sy miray fo miara-miasa hampandroso ny finoana ny Evanjely, 28ary tsy miraika na inona na inona afitsoky ny fahavalo: ka mariky ny famonjena kosa ho anareo, sady avy amin'Andriamanitra izany. 29Satria noho ny amin'ny Kristy, dia tsy ny hino azy ihany no nomena anareo, fa ny hiaritra fahoriana noho ny aminy koa, 30dia ny miaritra ny ady hitanareo niaretako, sy renareo ho mbola iaretako koa ankehitriny. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0191 seconds